epidural မေ့ဆေးသုံးပြီးမေ့ဆေးပေးပို့မှုလုပ်ငန်းစဉ် - မေ့ဆေး၏အသုံးအများဆုံးခေတ်မီနည်းလမ်း။ ဤနည်းလမ်းကိုဒါဆေးသမားများနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအကြားအများအပြားပရိတ်သတ်တွေအနိုင်ရ, ထိရောက်သောနှင့်နာကျင်မှု့မရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမွေးဖွားမှု၏ဖြစ်စဉ်ကိုကွဲပြားခြားနားသည်ကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးကငျြးပခဲ့သည်။ အခြားသူတွေလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်လွတ်လပ်စွာမွေးဖွားပေးစဉ်အချို့ကိုမခံနိုင်သောနာကျင်မှုကြုံနေရနေကြသည်။ သင်တန်း၏, တစ်ဦးချင်းစီမျှော်မိခင်အဆုံးစွန်သောပိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ ကလေးမွေးဖွားစဉ်က Epidural မေ့ဆေးသိသိသာသာကလေးမွေးဖွားပိုမိုလွယ်ကူစေသည်နာကျင်မှုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ပါးလွှာသည့်သဘာဝဖြစ်စဉ်တွင်ဆေးပညာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု - သို့သော်ရှိသမျှသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးကလေးမွေးဖွားစဉ်က epidurals ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြသင့်ပါတယ်။ သင်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဝံ့မတိုင်မီထို့ကြောင့်, သင်တို့ကိုဂရုတစိုက်ဒီနည်းလမ်းကို၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုချိန်သင့်တယ်။
ဘယ်လိုတစ်ခု epidural ပါသလဲ
lidocaine သို့မဟုတ် novocaine - သွားဘက်ဆိုင်ရာ၌ရှိသကဲ့သို့နီးပါးတူညီမူးယစ်ဆေးဝါးများမှာအသုံးပြုတဲ့မေ့ဆေး၏ဤနည်းလမ်းသည်။ အဆိုပါမေ့ဆေးဟာကျောရိုးတူးမြောင်း, အားဖြင့်ပြတ်တောက်နာကျင်မှုအတွက်အာကာသသို့ဒီဆေးတွေထဲကတစ်ခုထဲသို့ဝင်။ အဆိုပါထုံဆေးလုပ်အားအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထိုင်လျက်အဘယ်မှာရှိအနေအထားအတွက် lumbar ဒေသအတွင်းအုပ်ချုပ်သည်။
Epidural မေ့ဆေး - အကောင်းအဆိုး cons
အများစုမှာဆေးသမားတို့ကြောင့်အခြားအ analgesics ကျော်က၎င်း၏အားသာချက်မှကလေးမွေးဖွားစဉ်က epidural မေ့ဆေးကိုသုံးပါ:
ကလေးမွေးဖွားစဉ်က epidural မေ့ဆေးအပေါငျးတို့သအားသာချက်များနေသော်လည်း, ဒီနည်းလမ်းကိုမိခင်နှင့်ကလေးများအတွက်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ epidural မေ့ဆေး၏ဖြစ်နိုင်သောသက်ရောက်မှု:
ကလေးမွေးဖွားပေးခြင်းမိန်းမ supine အနေအထားအတွက်ဖြစ်တွန်းအားပေးသည့်သွေးပေါင်ချိန်, လျှော့ချ,
ဒါဟာကြိုးစားမှုစဉ်အတွင်း forceps ဘို့လိုအပ်ကြောင်းတိုးပွါး;
ဒါဟာ cesarean အပိုင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွါး;
ဒါဟာမိခင်အတွက် Post-partum haemorrhage များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးပွါး;
အဆိုပါရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထက်ဝက်ကလေး hypoxia စေပါတယ်;
မကြာခဏမွေးကင်းစအတွက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ function ကိုအာရုံချို့ယွင်း,
သိသိသာသာမွေးကင်းစများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ inhibited ။
epidurals ၏အကျိုးဆက်များသည်သူငယ်အတွက်အလွန်အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။ အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ကုသရန်လိုအပ်ကြောင်းမှတက်။ ဒါ့အပြင် epidural မေ့ဆေးပြီးနောက်ပြဿနာများမကြာခဏမိခင်များတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာသည်။
Epidural မေ့ဆေး cesarean များအတွက်စံပြနည်းလမ်းဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဒီ option ကသားဖွားစစ်ဆင်ရေး၏ဖြစ်စဉ်ကိုစောငျ့ရှောကျနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာမဆိုနာကျင်မှုခံစားရပါဘူးခွင့်ပြု, ယေဘုယျမေ့ဆေးမတူဘဲအတွက်နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ သာထုံဆေးလုပ်ကွက်အပြည့်အဝသတိအတွက်သားဘွားသောမိန်းမထွက်ခွာ, ဦးနှောက်မှသားအိမ်ကလာသောနာကျင်မှု Impulses သတင်းပို့။ Caesarean section မှာ Epidural မေ့ဆေးအလွန်အရေးကြီးပါသည်သောမိခင်နှင့်မွေးကင်းစအကြားကနဦးအဆက်အသွယ်များတည်ထောင်ခြင်းထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါပါဘူး။
Epidural မေ့ဆေး - contraindications
များစွာသောမိခင်နှင့်ဆရာဝန်များကမေ့ဆေး၏ဤနည်းလမ်းကိုပိုနှစ်သက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းကလေးမွေးဖွားစဉ်က epidural မေ့ဆေးအားလုံးကိစ္စများတွင်မဟုတ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ epidural မေ့ဆေးများအသုံးပြုခြင်းမှ Contraindications:
အထက်ပါပြဿနာများကိုမိခင်မဆို၏ရှေ့မှောက်တွင်ခုနှစ်တွင် epidural မေ့ဆေးသေခြင်းတရားအပါအဝင်ရောဂါပြင်းထန်သည့်ရောဂါများ, ဦးတည်သွားစေမည်အကြောင်းရှိသည်။
ကလေးမွေးဖွားစဉ်ကတစ်ဦး epidural ဘယ်လောက်သနည်း
ကလေးမွေးဖွားစဉ်က epidural မေ့ဆေး၏ကုန်ကျစရိတ်သားဖွားဆေးရုံ, ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ, အရည်အချင်းများမေ့ဆေးဆရာဝန်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသည်။ သားဖွားဆေးရုံ၏လွတ်လပ်သောပြည်နယ်ဌာနဆိုင်ရာများတွင်အခမဲ့ epidural ။ တိုင်းအသစ်ကမိခင်ကတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ၌၎င်း, ကြိုတင်အစီအစဉ်နှင့်အတူ epidural မေ့ဆေး၏ကုန်ကျစရိတ် $ 100 $ 800 ကနေကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါကြောင့်ကလေးမွေးဖွားစဉ်က epidural မေ့ဆေးကုန်ကျဘယ်လောက်ထွက်ရှာပါမီးဖွားခွင့်အပေါ်တစ်ဦးဖိုရမ်တစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တူညီသောဖိုရမ်တစ်ခုမှာ, သငျသညျကလေးမွေးဖွား၏ဤနည်းလမ်းအပေါ်သုံးသပ်ချက်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုထက်ပို 80% ဆရာဝန်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်လုံးဝဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်သောသဘာဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါသည် - မေ့ဆေး၏ပေးပို့နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခြင်း, အမျိုးသမီးတစ်ဦးမွေးဖွားကြောင်းမေ့လျော့တော်မသငျ့သညျ။
ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်လိပ်ခေါင်း - ထိုအကြောင်းတရားများနှင့်လူငယ်မိခင်များအတွက်အကောင်းဆုံးကုသမှု
ပုံမှန် Post-partum ကာလ
ဆာလဖာ - Homeopathy
Multivarka အတွက်ကြက်သားနှင့်အတူ Pilaf
အကြောင်းရင်းနှင့်ကုသမှု - ကိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ် Purulent ဝက်ခြံ
ပန်းပွင့် "အထီးပျော်ရွှင်မှုကို" - ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်ဖို့?
Chamomile တိုက်စားမှုနှင့်အတူ Douching
အမြိုးသမီးမြားရဲ့ duffle အင်္ကျီ - ကဘာလဲနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝတ်ဆင်နည်း
Goji သီး - အစားအသောက်များတွင်
Virgo - အမျိုးသမီးတစ်ဦး
စက်တပ် projection မျက်နှာပြင်